China Rubber Taya PSA Nitrogen na-emepụta ihe ọkụkụ na-emepụta na ụlọ ọrụ | Binuo
Akwa Adsorption Nzọụkwụ arụ ọrụ
A Adsorption Hapụ Nchacha Nhata nrụgide
B Nchacha Nhata nrụgide Adsorption Hapụ
N'otu oge ahụ, akwa adsorption nke ọ bụla na-arụ ọrụ dị iche iche. Ngbanwe oge na-enyere ọtụtụ akwa adsorption aka ịrụkọ ọrụ ọnụ ma na-amagharị ibe ha n'usoro oge na njikwa kọmputa, nke mere na ihe ọkụkụ na-emepụta ihe na-eme ka ikuku nitrogen (PSA) nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma ma na-aga n'ihu na-enweta nitrogen ngwaahịa.
Ngwa nke Osisi Na-emepụta Nitrogen PSA maka Taya Rubber
Nitrogen vulcanization na-ezo aka iji nitrogen obere nrụgide (0.4-0.5MPa) maka ịkpụ taya taya. Na usoro taya nke ọma vulcanization, na-ejuputa usoro na capsule bụ ngwakọta nke elu-nrụgide uzuoku na elu-nrụgide nitrogen (2.5MPa), na obere-nrụgide uzuoku na-eji maka vulcanization na mpụga okpomọkụ. yinye dị ka sub Ọdịdị nke eke roba na-agbanwe n'ime a netwọk Ọdịdị site na iji elu okpomọkụ, ka ọ dị ugbu a, a oyi akwa nke belt n'ígwé na-chiri chiri anya na-etolite a ụkpụrụ na tread.
N'ule a, njirimara arụmọrụ nke taya dị ka ihe nlegharị anya, ịdịte aka, ịdị n'otu na ike ntanye, ikuku nitrogen dị elu karịa vulcanization mmiri ekpo oke ọkụ nke ọdịnala. Nitrogen vulcanization na-edozi ọnọdụ ọrụ gara aga, nke siri ike ịhazigharị nrụgide na okpomọkụ nke uzuoku na mmiri dị ọkụ. Na-eme ka ọ dị mfe ma na-eme ka usoro vulcanization guzosie ike, na-ebelata nke ọma ihe omume nke enweghị roba, delamination na afụ na taya taya, na nhazi na ụgwọ ọrụ.
N'ụzọ pụrụ iche, nitrogen na-adị ọcha na-ekpochapụ mmalite vulcanization nke capsule vulcanized, ma na-abawanye nkezi ndụ capsule site na 10%.
Nitrogen na-ejuputa taya
Nitrogen bụ gas inert nke na-ezere oxidation nke rim na taya taya. Ọnụego ntinye nitrogen n'ime mgbidi taya bụ naanị 1/6 nke oxygen. Ya mere, taya na-ejuputa nitrogen nwere ikike njigide nrụgide taya siri ike, ọ pụtara na ọ dịghị mkpa ịmegharị ikuku ugboro ugboro ma belata esemokwu iji chekwaa mmanụ. E jiri ya tụnyere taya na-ejuputa ikuku, ọ ga-eme ka nrụgide taya kwụsie ike iji belata ohere nke ịgbawa taya ma melite nchekwa nke ịnya ụgbọ elu dị elu. N'ime oghere nke taya taya jupụtara na ikuku nkịtị, ọdịnaya nke oxygen na mmiri dị oke elu. Oxygen ji nke nta nke nta abanye na mgbidi taya site na oghere dị n'ime. Ya mere, ụmụ irighiri ikuku oxygen na-emeghachi omume na ụmụ irighiri ihe na-adịghị mma nke rọba ma na-eme ka rọba na-aka nká ruo mgbe ọ ga-ekpochapụ. Ma na nitrogen na-ejuputa taya, ntinye nitrogen dịkarịa ala 95%, nke na-echebe roba site na ịka nká ma mee ka ndụ ọrụ nke taya ahụ dịkwuo ogologo.
N'ihi na nrụgide taya nke taya nitrogen na-ejuputa nwere ike ịdịgidere ogologo oge, nrụrụ taya na-adịghị mma na oriri mmanụ ụgbọala na-ebelata.
Nkọwapụta Mpụta(Nm³/h) Oriri gas dị irè (Nm³/min) Ntinye DN(mm) Ọnụ ụzọ DN(mm)
Nke gara aga: Laser Cutting PSA Nitrogen Generator Plant
Osote: Igwe na-emepụta Nitrogen PSA eletrọnịkị
Atlas Copco Ngp, Psa Nitrogen osisi, Hydrogen na Oxygen Generator, Holtec Nitrogen Generator, Ọgbọ ike hydrogen, Psa Nitrogen,